प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै : यस्तो छ कार्यसूची – Digital Khabar
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै : यस्तो छ कार्यसूची
By डिजिटल खबर Last updated Mar 16, 2021
०३ चैत, काठमाडौं । पुनर्स्थापित संसदको तेस्रो बैठक बस्दै छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्न लागेको हो। यस अगाडि दुईवटा बैठक बसे पनि कुनै एजेन्डा प्रवेश गर्न पाएको छैन। मंगलबार बस्‍ने बैठकमा पनि कुनै बिजनेस छैन र शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्र उल्लेख छ। २०७० सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बाँके २ बाट यादव निर्वाचित भएका थिए । २०७७ माघमा यादवको निधन भएको थियो ।
दलीय झगडामा अल्झियो संसद्, मंगलबारको बैठकमा पनि शोक प्रस्ताव मात्रै
यसअघि फागुन २६ गतेकै बैठक पनि पूर्व र बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो। सत्तारुढ र अन्य दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई सकस परेको छ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुकले निकास पाउने आम आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ र राजनीतिक संक्रमणले झन् जटिल रुप लिएको छ।
रिसाएकी मेलम्ची !!! #DigitalKhabar
सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची बाढी आतङ्क | #DigitalKhabar #BadiPahiro #Melamchi
निषेधाज्ञा बिच गुडेकाे सवारी साधनहरु चेक जाचँ गर्दै ट्राफिक प्रहरी #digitalkhabar #Covid19
स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थपियो, के तिर्ला त ४ अर्ब ८१ करोड ?
बजाजको नयाँ अफरः २ लाखको मोटरसाइकलमा १० लाखसम्म नगद छुट
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा रु एक अर्बको क्षति
आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
९ असार २०७८, बुधबार १८:२१
थप २४२१ जना संक्रमित, ३५५८ जना संक्रमणमुक्त
सिड्नीमा ‘डेल्टा’ स्वरुपको पुष्टि, नयाँ प्रतिबन्ध लगाइदै
ललितपुरका ज्येष्ठ नागरिकलाई आज कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज…
खोप उत्पादन ल्याब विस्तारमा एसके बायोसाइन्सले एक खर्ब ५०…
सार्क राष्ट्रमा सङ्क्रमण घट्दै, भारतमा सबैभन्दा धेरै भूटानमा…
युरोकपमा आज समूह चरणको‘ई’ र समूह ‘एफ’का खेल हुँदै
कोपा अमेरिकामा समूह बी को दुई खेल हुदै
उमेर बढ्दै जाँदा शरीरलाई चाहिने भिटामिन र खनिजहरूको विशेष…
डिजिटल खबर ९ असार २०७८, बुधबार २२:१५
९ असार २०७८, बुधबार १८:४८